म नेपालगन्जमा कानून व्यवसाय गर्थें । तत्कालीन पुनरावेदन बार एसोसिएसनको अध्यक्ष थिएँ । २८ फागुन ०५८ मा शिवरात्रीको बिहान लगभग ३ बजेको समय हुँदो हो । ठूली छोरी वर्ष ७ की आयुषी र म एउटै पलङमा सुतिरहेका थियौँ । नेपालगन्ज नगरपालिका वडा–१२ स्थित राजु भट्टराईको घरमा मेरो डेरा थियो । म बस्ने डेरासँगै बाँके जिल्ला अदालतको परिसर जोडिएको थियो । बाटोपारि पुनरावेदन अदालत र शाही नेपाली सेनाको फिए गुल्म रहेको छ ।
थुनामा राखेको १५–१६ दिन हुँदो हो, मलाई बाहिर चौरमा निकालेर राखियो । आँखाको पट्टी हटाइएन । हत्कडी पनि खोलिएन । एक जनाले सोधे, ‘तँलाई आतंककारी विध्वंसात्मक अपराध र सजाय ऐन, २०५८ को दफा ९ बमोजिम किन नमार्ने ? सफाइ पेस गर ।’ मैले ‘तपाईँहरूले घरमा सुतेको निस्शस्त्र मानिसलाई अपहरण गरेर कब्जामा राखेर हत्या गर्नु भनेको गैरन्यायिक हत्या हो । यस्तो अवस्थामा दफा ९ लागू हुँदैन’ भन्दै थिएँ । मुखमा बेस्सरी ढुंगाले हानेजस्तो भयो, बुटले हानिएको रहेछ्र । त्यसपछि मलाई निर्माणाधीन बंकर लगेर राखियो । बंकरमा अँध्यारो नै अँध्यारो थियो । त्यहाँ बन्दीहरूलाई हत्या गर्ने गरिँदो रहेछ । हत्यापछि बाहिर लगेर गाडिँदो रहेछ । त्यो बंकर चिसापानी ब्यारेकको मध्यभागमा छ्र । मलाई दुई दिनसम्म त्यही बंकरमा राखियो । आँखा खोलिदिएपछि थाहा पाएँ, बंकरमा मारिएका बन्दीहरूका लाश सँगै राखिएको रहेछ ।
चिसापानी ब्यारेकमा मुख्यतस् ३ प्रकारका ज्यादती भए । गैरकानुनी थुना, गैरन्यायिक हत्या, अपहरण शैलीमा पक्राउ गर्ने र फिरौती लिएर छाड्ने । बलात्कारजस्ता डरलाग्दा घटना पनि भए । थुनुवाको हत्या गर्दा त्यहाँको कोड ‘खाजा खाने’ राखिएको थियो । आज यति जनाको खाजा खाइयो भनेपछि आज यति जना मारिए भनेर बुझ्थ्यौँ । यति क्रूर ढंगले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइन्थ्यो कि बाँचेर फर्किने आशा मारिसकेको थिएँ । अन्यत्र भएको भिडन्तबाट उत्तेजित भएर ब्यारेकमा यातना दिइन्थ्यो । मरणासन्न हुने गरी पिटिन्थ्यो ।
दुई महिनापछि मलाई थुनुवा नं १५ को ट्याग लगाइयो । नेपाल बार एसोसिएसन, अन्तर्रा्ष्ट्रिय बार एसोसिएसन, आईसीआरसी, एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायत अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंस्थाको पहलमा मेरो जीवनरक्षा भयो । आईसीआरसीका प्रतिनिधिको रोहवरमा १ असार ०५९ मा मलाई मेरो परिवारको जिम्मा लगाइयो, रिहा गरियो । चिसापानीस्थित भीमकाली गुल्ममा मलाई दिएको यातनाको कारणले शरीरको देब्रे भाग, हातखुट्टा र ढाड झम्झमाउने, चिसोमा दुख्ने, बसेर उठ्न गाह्रो हुने समस्या भइरहन्छ । तत्कालीन शाही नेपाली सेना भीमकाली गुल्ममा भएको क्रूर यातना कुनै पनि बन्दीले भोग्नु नपरोस् । अपराधीहरूले सजाय पाऊन्, दण्डहीनता अन्त्य होस् ।
साभार-नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, मंसिर २७, २०७६, ०४:१२:००
‘छोरी ठूली भई’ यो वाक्य म घर आएकै दिनबाट सुन्दै छु । बाबा मम्मीलाई यो ठूली भएकी छोरीलाई समाजले घरमा नराख भन्दै गरेको त मैले पनि नबुझेको कहाँ हो र ? पुरा पढ्नुहोस्